သမိုင်း၏ရသ။ ဇေရုဗဗေလနှင့်ဧဇရ l1 | Dam Mang
စက်တင်ဘာ ၂၈ – အောက်တိုဘာ ၄
ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း စက်တင်ဘာ ၂၈
ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ယေရမိ ၂၅း၁၁၊၁၂။ ဒံယေလ ၉း၁၊၂။ ဧဇရ ၄း၁-၇။ ဟေရှာယ ၅၅း၈၊၉။ ဧဇရ ၇း၁-၂၈။
‘ပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုမင်းမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် မြေကြီးပေါ်မှာတိုင်းနိုင်ငံရှိ သမျှတို့ကို ငါ့အားပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ယုဒပြည်ယေရုရှလင်ြုမိ့၌ အိမ်တော်ကိုငါတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်း မှာထားတော်မူပြီ’ (ဧဇရ ၁း၂)။
ယေရမိမှတ်စာကိုရေးသားထားရာ၌ နှစ်ပေါင်း (၇၀) ပြီးနောက်၊ ပြည်နှင်ဒဏ်ခံရသောဣသရေလလူမျိုးတို့သည် ဗာဗုလုန်ပြည်မှ ယုဒပြည်သို့ ပြန်လာရမည်ဟုြုကိတင်ပြောထားသည်။ ထိုသို့ပြန်လာနိုင်ရန် ဘုရားသခင် သည် ကုရုမင်းကြီးကိုနှိုးဆော်ခြင်းကြောင့် ဣသရေလလူတို့ ယေရုရှလင်ြုမိ့ သို့ပြန်လာကြရသည်။ ဘုရားသခင်၏ဘိသိက်ပေးခြင်းကြောင့် (ဟေရှာယ ၄၅း၁)၊ ကုရုမင်းကြီးသည် ဘီစီ ၅၃၈ ၌အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ဘုရားသခင် ၏လူများကို လွတ်လပ်ရေးပေးကာ၊ ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် မိမိတို့၏တိုင်းပြည်သို့ ပြန်လည်စေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်ြုမိ့ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ပြောသောစကား ‘ယေရုရှလင်ြုမိ့တည်ဆောက်စေ၊ ဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်ကျစေ’ (ဟေရှာယ ၄၄း၂၈) သည် ဘုရားသခင်မှပြော သောစကားဖြစ်သည်။ ကုရုမင်းပြောသောစကားမဟုတ်ပါ။ ကုရုမင်း၏စိတ်နှလုံး ကိုနှိုးဆော်၍သာ ကုရုမင်းမှအမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ြုပတော်မူသောအကြောင်းအရာကို ကိုယ်တော်၏လူမျိုး တော်စုမှတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိရန် အစဉ်တိုက်တွန်းခြင်းခံကြရသည်။ ထိုအခါ ယုဒ အဆွေအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အဆွေအမျိုးသူကြီးများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသား များနှင့်တကွ ဘုရားသခင်နှိုးဆော်တော်မူသောသူအပေါင်းတို့သည် ယေရုရှလင်ြုမိ့၌ရှိတော်မူသော ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကို တည်ဆောက်စေခြင်းငှာ ထကြ၏။ (ဧဇရ ၁း၅)။
ဤတွင်လူများတို့သည် ဘုရားသခင်ြုပတော်မူသောအမှုကိုတုံ့ပြန်ရာ ၌ တညီတညွတ်တည်ြးုပကြ၏။ အကောင်းဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုမှာ ဘုရားရှင် သည်မည်သူဖြစ်၍၊ ဘုရားရှင်သည် မည်သည့်အမှုကြိုပတော်မူခဲ့ကြောင်းကို သိရှိနားလည်ခြင်းနှင့်အတူ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မြှုပခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် မိမိ၏လူမျိုးတော်ကို မည်ရွေ့မည်မျှချစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်း သိရှိ နားလည်ခံစားရခြင်းဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေ စက်တင်ဘာ ၂၉
ယေရမိ ၂၅း၁၁၊၁၂ နှင့် ၂၉း၁၀ နှင့် ဒံ၊ ၉း၁၊၂ ကိုဖတ်ပါ။ ပြည်တော်ပြန်ပထမအသုတ် မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သနည်း။ မည်သည့် ပုရောဖက်ြုပစကားမှ ပြည်တော်ပြန်ရန်အတွက်ပြည့်စုံခဲ့သနည်း။
ပထမအသုတ်ပြည်တော်ပြန်ရန်အခွင့်ကို ဘုရားသခင်သည် ကုရု မင်းကြီးအားနှိုးဆော်၍ ယေရမိ၏နှစ် (၇၀) ပုရောဖက်ြုပစကားကို ပြည့်စုံသွား စေခဲ့သည်။ ယေရမိသည် ယုဒနိုင်ငံအနှစ် (၇၀) ဗာဗုလုန်တိုင်းပြည်၏ လက်အောက်၌ အထီးကျန်နေရမည့်အကြောင်းကိုြုကိတင်ရေးသားထားသည်။ (ထိုအချိန်ကာလမှာ ဘီစီ ၆၀၆/၆၀၅ မှ ဘီစီ ၅၃၇/၅၃၆ အထိဖြစ်သည်။) သို့သော် ဘုရားသခင်သည် တိုင်းတစ်ပါးသို့ပါသွားသောသုံ့ပန်းများ ပြည်တော် ပြန်ရန်အခွင့်ကို တံခါးများဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ဒံယေလသည် ယေရမိ၏ ရေးသားချက်များကိုလေ့လာရင်း ပြည်တော်ပြန်ရမည့်အချိန်ကာလကို သတြိုပ မိတော့သည်။
ဒံယေလအခန်းကြီး (၉) သည် စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားသောအကြောင်း ကိုရေးသားထားခြင်း၌ နှစ် (၇၀) ပြည့်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ၊ သို့သော် မည်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းအရိပ်အယောင်မျှမမြင်ရသေးပါ။ ပါရှန်အင်ပါယာ အသစ်၏တန်ခိုးအင်အားပင်ပေါ်ထွက်လာပြီ။ ဒံယေလသည် ငိြုွေကးမြည်တမ်း လျက် ဘုရားသခင်ထံသို့ကရုဏာတော်ကျရောက်ပေးစေရန်နှင့် ကတိတော် အတိုင်းပြည့်စုံရန် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထိုအခန်းကြီးထဲမှာပင် (ဒံ ၉း၂၄- ၂၇) ဘုရားသခင်သည် ဒံယေလကိုသေချာတိကျသောအနာဂတ်အကြံအစည် တော်နှင့်အတူ အချင်းအရာတိုင်း၌ ကိုယ်တော်ကြည့်ရှုတော်မူကြောင်း အတည်ြုပ ပေးသည်။ ရွေးနုတ်ကယ်တင်ပေးမည့်သူနှင့် အသေခံအပြစ်ြွေကးကိုဆပ်ပေး မည့်သူ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုယူဆောင်လာပေးမည့်သူ၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အမှုကိုလည်း အဆုံးသတ်ပြည့်စုံစေမည့်အကြောင်း တစ်ပါတည်ြးွမက်ကြား တော်မူခဲ့သည်။ ထိရောက်သောဘုရားရှင်၏စကားတော်၌ ‘ဒံယေလ၊ မစိုးရိမ် နှင့်။ ကယ်နုတ်မည့်အရှင် (ယေရှု) သည် ဧကန်အမှန်လာမည်။ ယခုသင့်ထံ သို့လည်း ကယ်နုတ်မည့်သူကိုငါစေလွှတ်မည်။’ အချိန်မကြာမီအတွင်းမှာပင် ဘုရားသခင်သည် ကုရုမင်းကြီးကိုနှိုးဆော်တော်မူ၏။ သူသည် ပါရှန်ဧက္ကရာဇ် မင်းကြီးဖြစ်သည်။ သုံ့ပန်းများကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရန် အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်စေ ခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်၏ကတိတော်သည် အစဉ်တည်မြဲနေသည်။ ဘုရားသခင် သည် မိမိ၏လူမျိုးတော်ကို မည်သို့မည်ပုံမိမိတို့၏နေရင်းပြည်၌ြွကယ်ဝ ချမ်းသာခွင့်ပေးကြောင်းကို ဒံ၊ ၁၁ တွင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဧဇရမှတ်စာအခန်း (၁) ၌ ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံး ယေရုရှလင် သို့ပြန်သွားရန်နှင့် အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ကြရန် ကုရုမင်းကြီးမှလွတ်လပ် စွာခွင့်ပေးကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ ထိုအမိန့်သည် ခရစ်တော် မပေါ်ထွန်းမီ နှစ် ၅၃၉-၅၃၇ စပ်ကြားတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကုရုမင်းသည် ဣသရေလလူများကို လက်ချည်းသက်သက်ပြန်ခွင့်ြုပခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာများပါထည့်ပေးလိုက်သည်။ ငှင်းအထဲ၌ တစ်ချိန်မှ ယေရုရှလင်ြုမိ့ကိုသိမ်းပိုက်စဉ် ဗိမာန်တော်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သိမ်းယူလာရာမှ ယခုတွင်ပြန်လည်ပေးအပ်လိုက်သည်။ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီး သိမ်းယူခဲ့သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ထိုအချင်းအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမှတ် ရစေသောအကြောင်းတစ်ခုသည် ဣသရေလလူမျိုးများ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်ခွာ လာသောအခါ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာရရှိလာခဲ့ခြင်းကို အမှတ်ရစေပါသည်။ ယုဒပြည်သို့ပြန်လာသောလူပထမအသုတ်မှာ လူပေါင်းငါးသောင်း (၅၀çဝ၀ဝ) ဖြစ်ပြီး၊ အများစုမှာ နယ်စုံပယ်စုံမှကလေးသူငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများဖြစ် ကြသည်။
အခြားသောနှုတ်ကပတ်တော်မှဖော်ပြသည့် ကတိတော်ဆိုင်ရာအနာဂတ္တိ သမိုင်းကြောင်းများ ပြည့်စုံခဲ့ခြင်းရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိတ်သက်သာ ခြင်းမျိုးဖြစ်စေမည့် ဥပမာမျိုးကိုရယူနိုင်ပါသလား။ ဘုရားသခင်သည် အနာဂတ် ကြိုကိတင်သိမြင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကိုယ်တော်၏ကတိတော်ကိုစိတ်ချ နိုင်ပါမည်လား။
တနင်္လာ စက်တင်ဘာ ၃၀
ပြည်တော်ပြန်ပထမအသုတ်မှလူများသည် ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည် တည်ဆောက်ရန် တာဝန်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ လာမည့်သင်ခန်းစာ၌ ဗိမာန် တော်ကိုတည်ဆောက်ရာ၌ ဆန့်ကျင်မြှုပခံရပုံကို လေ့လာသွားပါမည်။ ယခု လေ့လာမည့်အကြောင်းအရာမှာ ပါရှန်ဘုရင်များတို့၏အောင်မြင်မှုနှင့် ဗိမာန် တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ယေရုရှလင်ြုမိ့ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်း ကို လေ့လာသွားရပါမည်။ ဧဇရနှင့်နေဟမိမှတ်စာကိုလေ့လာရင်း အဖြစ် အပျက်၏နောက်ခံသမိုင်းကိုသိရှိထားရန် အထူးအရေးကြီးလှပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုကျမ်းများမှနက်ရှိုင်းသောသတင်းစကားများပါရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဧဇရ ၄း၁-၇ ကိုဖတ်ပါ။ ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ချိန်၌ မည်သည့် ဘုရင်များက တားဆီးနှောင့်ယှက်ခဲ့သနည်း။
ဧဇရနှင့်နေဟမိမှတ်စာအရ ပါရှန်ဘုရင်များနှင့် ယင်းတို့၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကိုရေးမှတ်ထားသည်။ ကုရုမင်းကြီးအကြောင်းမှစတင်ခဲ့သည်။ ပါရှန်အင်ပါယာ ကိုတည်ထောင်သူ ဗာဗုလုန်ပြည်ကို ဘီစီ ၅၃၉ ၌ အောင်တော်မူပုံကိုရေးသား ထားသည်။
‘မဟာ’ ကုရုမင်း (၂) – (၅၅၉-၅၃၀ ဘီစီ)
Cambyses ဘုရင် – (၅၃၀-၅၂၂ ဘီစီ)
ဒါရိမင်း (၁) – (၅၂၂-၄၈၆ ဘီစီ)
ဇေရဇ်မင်းကြီး (၁) – (၄၈၅-၄၆၅ ဘီစီ) အာရွှေရုရှင်ဘုရင်ဟုလည်း ဧသတာကျမ်းတွင်ဖော်ပြသည်။
အာတေဇေရဇ်မင်းကြီး (၁) – (၄၆၅-၄၂၄ ဘီစီ)
ဧဇရနှင့်နေဟမိမှတ်စာကိုလေ့လာရာတွင် ရှင်ဘုရင်များတို့၏ရာဇဝင် သမိုင်းကို ဧဇရမှတ်စာမှ နေ့စွဲအစီအစဉ်အတိုင်ြးုပစုထားခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာ၊ ဧဇရ ၄း၆-၂၄ သည် အခန်းကြီး (၅) ၏ရှေ့တွင်ရေးမှတ်ထားခြင်းမှာ ဗိမာန်တော်ကိုဆောက်လုပ်ရာ၌ ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်ခြင်းအကြောင်းကို တစ်ဆက်တည်းရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတ်စာ၌ ဇေရဇ်မင်းကြီး (၁) (အာရွှေရု) နှင့် အာတေဇေရဇ် (၁) အကြောင်းကို ဧဇရအခန်းကြီး (၄) တွင်ပါရှိနေသော်လည်း အမှန်စင်စစ် အခန်းကြီး (၅) နှင့် (၆) ၏အကြောင်းအရာနောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်လာသောအကြောင်းအရာများပင်ဖြစ်သည်။ ဒါရိမင်းကြီး (၁) ၏လက်ထက်မှာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖတ်ရှုသူ များအတွက် သို့လောသို့လောဖြစ်လာနိုင်သလို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ လက်ဆင့်ကမ်းမှတ်သားလာရခြင်းအတွက် အကြောင်းအရာနှင့်အချိန်များ ရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်ရေးသားမှတ်သားထားမိခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယခု သုံးလပတ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားကြရာတွင် အဖြစ်အပျက်များ အစဉ်လိုက်သိရခြင်းဖြင့်သာ ဧဇရနှင့်နေဟမိမှတ်စာကိုလေ့လာရာ၌ ယင်းတို့၏ ပေးလိုသောသတင်းစကားများကို ပို၍နားလည်စေရန် အထောက်အကူဖြစ် စေလိမ့်မည်။
သမ္မာကျမ်းစာမှသင့်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောအကြောင်းများ သင်ဖတ်ရှု မိဖူးပါသလား။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားရန် သင်မည်သို့သင်ယူမည် နည်း။ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်လျက်၊ သင်အလိုမကျသောရေးသားချက်များကို မြင်တွေ့ရသည့်တိုင် မည်သို့ကျော်လွှား သွားမည်နည်း။ ထိုသိြု့ပလုပ်ရန် အဘယ်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးနေပါ သနည်း။ (ဟေရှာ ၅၅း၈၊၉)။
အင်္ဂါ အောက်တိုဘာ ၁
ဧဇရမှတ်စာ ၇း၁-၁၀ နှင့် ၈း၁-၁၄ တို့တွင် မင်းကြီးအာတေဇေရဇ် ဘုရင် (၁) သည် ဧဇရအား ယေရုရှလင်ြုမိ့သို့ပြန်ရန် အခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ (သက္ကရဇ်မှာ ၄၅၇ ဘီစီဖြစ်သည်။) သူနှင့်အတူပြန်လိုက်လို သူများကို တစ်ပါတည်းခေါ်ဆောင်ခွင့်လည်းပေးခဲ့သည်။ ဘုရင်မင်းကြီးနှင့် ဧဇရမည်ရွေ့မည်မျှရင်းနှီးသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိရပါ။ သို့မဟုတ် ဧဇရသည် မင်းကြီး၏တရားစီရင်ရေးတရားခွင်၌ အမှုဆောင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ သေချာစွာကျွန်ုပ် တို့မသိရပါ။ ဧဇရအခန်းကြီး (၈) ၌၊ ပြည်တော်ပြန်မိသားစုများစာရင်းကို မှတ်တမ်ြးုပထားသည်။ ပြည်တော်ပြန်ယဇ်ပုရောဟိတ်များမှစတင်ကာ နန်းတော် တော်ဝင်ဘုရင်မျိုးနွှယ်မိသားစုဝင်စာရင်းမှ သည်သာမန်ဂျူးလူမျိုးလူထုလူတန်းစား အရေအတွက်စာရင်းအထိြုပစုထားသည်။ အထူးသဖြင့် ဣသရေလတစ်ဆယ့် နှစ်မျိုးတို့၏ဆွေမျိုးအလိုက်စာရင်းကို တမင်ရည်ရွယ်သောအားဖြင့် မှတ်တမ်းြုပထား၏။
စာရင်းဇယာြးုပရာ၌ ယောကျာ်းချည်း (၁၅၀ဝ) နှင့် အမျိုးသမီး နှင့်ကလေးသူငယ်များကိုပါ ထည့်ဝင်ရေတွက်သော်၊ ခန့်မှန်းချေ (၅၀ဝ၀) မှ (၆၀ဝ၀) အထိရှိမည်ဟု မှတ်တမ်းရှိသည်။ ဒုတိယအသုတ်ပြည်တော်ပြန် အရေအတွက်သည် ပထမအသုတ် ဇေရုဗဗေလနှင့်ယောရှုတို့နောက်ပြန်၍ပါ သွားသောအသုတ်နှင့်နှိုင်းစာလျှင် အလွန်နည်းလှပါသည်။ ဧဇရ ၇း၁-၁၀ ကိုဖတ်ပါ။ ဧဇရအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို့သွန်သင်ထားသနည်း။
ဧဇရသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ်ဝင်များနှင့်အတူ ကျမ်းစာကိုနှံ့စပ် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးတွင် ပထမဦးဆုံးသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးဖြစ်သော အာရုန် (မောရှေ၏အစ်ကို) ၏အနွယ်မှ ဆင်းသက်သည်။ ဧဇရ၏မှတ်တမ်းမှတ်ရာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဂျူးလူမျိုး များတို့၏မိရိုးဖလာအရသော်လည်းကောင်း ဧဇရဟူသောနာမည်သည် ယနေ့ တိုင်ရေပန်းစားလျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အာတေဇေရဇ်မင်းကြီး၏ရုံးတော်တွင် ဧဇရသည် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်စာတတ်ပေတတ်တစ်ဦးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည် မထမ်းခဲ့သည်ကို အတည်ြုပ၍မရပါသော်လည်း၊ သူ၏ရေးသားမှတ်တမ်ြးုပစု ထားခြင်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ပင်လျှင် ထမ်းဆောင်ခဲ့သောတာဝန်များ၊ သို့မဟုတ် သူ၏အရည်အချင်းများသည် ယုဒပြည်သို့ပြန်ရောက်သည်နှင့် စတင်လုပ်ဆောင် သောအလုပ်၌ပေါ်လွင်နေသည်။ သေချာသည်မှာ ဧဇရသည် ရှင်ဘုရင် အာတေဇေရဇ်မင်းနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီး အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး သူ၏ အရည်အချင်းကို ဘုရင်ကြီးသည်သိသောကြောင့် ပြည်တော်ပြန်ရန်ဦးဆောင်သူ ရာထူးကြီးကို အပ်နှင်းခြင်းပင်ဖြစ်ရမည်။
ဧဇရ ၇း၆ နှင့် ၁၀ ၌၊ ဧဇရသည် ကျွမ်းကျင်သောပညာတတ်၊ သို့မဟုတ် ဆရာတစ်ဆူဟု ရည်ညွှန်းရေးသားထားသည်။ ကျွမ်းကျင်ခြင်း ဝေါဟာရသည် ဖျတ်လတ်လျင်မြန်စြွာုပနိုင်ခြင်းဟု တစ်နည်းအားဖြင့်အဓိပ္ပါယ် ရှိ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာရောစိတ်ရော သွက်လက်ပေါ့ပါးထက်မြက်ခြင်းကိုဆိုလိုပါ သည်။ ဧဇရသည် အလွန်ဥာဏ်ကောင်းပြီးထက်မြက်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်နှင့်ဆိုင်၍ နှံ့စပ်သူဖြစ်သည်။ ဥာဏ်ပညာနှင့်အနေအထိုင် အသွားအလာတွင် လူရည်လည်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများကို ပြည်တော်သို့ပြန်ခေါ်လာရန် ရှင်ဘုရင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့်အကြောင်းမှာ ဧဇရသည် ရဲရင့်ပြီးခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ဧဇရသည် မိမိ၏စိတ်နှလုံးကို ‘ထာဝရဘုရား၏တရား တော်အား စစ်ဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာပြင်ဆင်ထား’ သည်။ (ဧဇရ ၇း၁၀)။ ငှင်းနည်းအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် မည်သိြု့ပရ မည်နည်း။
ဗုဒ္ဓဟူး အောက်တိုဘာ ၂
ဧဇရ ၇း၁၁-၂၈ ကိုဖတ်ပါ။ ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်စာ၌ မည်သို့ပါရှိ သနည်း။ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးပါ သနည်း။
အာတေဇေရဇ်မင်း၏အမိန့်စာ၌ ကနဦးကုရုမင်းကြီး၏အမိန့်စာကို ပင် ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်၏။ ယေရုရှလင်သို့ပြန်သွားရန်ခရီးကို မည်သူ မဆိုအထူးသဖြင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်အနွယ်မှပြန်လိုက ပြန်နိုင်ကြောင်းပါရှိ၏။ ‘မူရာရှူ’ (Murashu) ရာဇဝင်မှတ်တမ်းအရ၊ အများစုသောဂျူးများသည် ပြည်တော်သို့မပြန်ဘဲ ပါရှန်နိုင်ငံတွင်သာ ဆက်လက်နေထိုင်ကြသည်။ အသစ် တက်လာသောရှင်ဘုရင်မှပေးမည့်အခွင့်အရေးကို မျှော်လင့်စောင့်စားကာ ဘဝသစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် မိမိတို့တိုင်းပြည်သို့မပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ (ဧသတာဝတ္ထု၌လည်းဖော်ပြသည်။) ရှင်ဘုရင်သည် ယူဖရေးတီးနယ်ပယ် တစ်လျှောက်ရှိ ဘဏ္ဍာထိန်းများအားလုံးကို အမိန့်ထုတ်ညွှန်ကြားချက်ြုပသည်။ ဧဇရ၌လိုအပ်သမျှြုမိ့တော်ကိုပြင်ဆင်ရန်စရိတ်၊ ‘ဘုရားသခင်၏အိမ်တော် ကို လှပတင့်တယ်စေရန် ဆောက်လုပ်မည့်စရိတ်များကို’ လိုလေသေးမရှိ ကူညီထောက်ပံ့ရမည့်အမိန့်စာပါရှိသည်။ (ဧဇရ ၇း၂၇)။ ဘုရင်မင်းကြီးသည် ဧဇရအား တရားရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို ချမှတ်စေခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်ချက်နှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိဥပဒေများကို လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရန် အခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရာ၌ အစီအစဉ်တကျ စည်းကမ်းရှိရန်အမိန့်သည် အထူးအရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရင်မင်းကြီး သည် ဧဇရနှင့်ဣသရေလလူမျိုးများ မိမိတို့၏တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင် ရာ၌ ပို၍လွယ်ကူစေရန် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ြုမိ့တော်နှင့်ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လည်ြုပပြင်ရန် လုပ်ဆောင်သောရှင်ဘုရင် သည် ဧဇရ၏ဘုရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသလား။ အာတေဇေရဇ်မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရားကို ‘ယေရုရှလင် မှာကိန်းဝပ်တော်မူသော ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်’ (ဧဇရ ၇း၁၅) ဟုခေါ်၏။ ဣသရေလတို့၏ဘုရားဟု မင်းကြီးခေါ်ဆိုရခြင်း၌ ဒေသဝန်းကျင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု၌ ဘုရားများစွာရှိကြသည်။ မိမိအုပ်ချုပ်နေသောဒေသတွင်း တိုင်းသူပြည်သားများ သူ့အပေါ်စိတ်ကွက်သွားမည်ကို ဘုရင်မင်းကြီးမလိုလား သောကြောင့် ထာဝရဘုရားကို ဣသရေလတို့၏ဘုရားဟု ခွဲခြားခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ဘုရင်မင်းကြီးနှင့်မင်းကြီး၏သားတော်များကို အခြားသတ်မှတ် ထားသောဘုရားတို့၏အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းကိုလည်း မလိုလားခြင်းဖြစ်သည်။ (ဧဇရ ၇း၂၃)။ ထပ်လောင်းသတိချပ်စရာအကြောင်းတစ်ခုမှာလည်း ဘီစီ ၄၅၇ တွင် အီဂျစ်လူမျိုးများက ပါရှန်အစိုးရကိုတော်လှန်ပုန်ကန်သောနှစ်ဖြစ် သည်။ ထိုကိစ္စကြောင့်လည်း ယုဒလူမျိုးများနေထိုင်သောဒေသနယ်ပယ်၌ မိမိ၏လက်အောက်၌ အုပ်ချုပ်မှုတည်တံ့ရန် ယုဒလူမျိုးတို့၏လေးစားခြင်း ကိုလည်း ရယူခြင်းသဘောရှိသည်။
အကြောင်းမလှခဲ့၍ ဘုရင်ကြီးသည် ဧဇရနှင့်နေဟမိတို့ကို ရင်းရင်း နှီးနှီးပေါင်းသင်းခဲ့သော်လည်း ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သူတစ်ပါးဖြစ်မလာ ခဲ့ပါ။ ကျမ်းစာပါရည်ညွှန်းချက်အရ၌လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားရှင်၏အလို တော်ကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရန်အသုံးခံရသော မပြောင်းလဲခဲ့သူများစာရင်း တွင်လည်း မပါရှိခဲ့ပါ။
နာကျင်မှုဒုက္ခခံစားရသောအခါ၌ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်းချုပ်အုပ်စိုးနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်း။
ကြာသပတေး အောက်တိုဘာ ၃
ဧဇရ ၇း၆ နှင့် ၁၀ ကိုဖတ်ပါ။ ဘာသာတရားနှင့်ဆိုင်သောပညာ သည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ကျမ်းချက်မှမည်သို့သွန်သင်ထားသနည်း။
ဧဇရသည် မိမိ၏စိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးကို ဘုရားရှင်ထံအပ်နှံကာ နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း လေ့လာဖတ်ရှုကျင့်စောင့်သင်ကြားပေးရန် စိတ်ဆုံးဖြတ် ထားသည်။ (ဧဇရ ၇း၆၊၁၀)။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးအတွက် အမှုဆောင်ရွက်ရန် ကောင်းစွာပြင်ဆင်မြှုပထားနိုင်ခဲ့သည်။ ကျမ်းချက်ပါ စကားလုံးများ၏တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ချက်မှာ၊ ဧဇရသည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရားရှင်ထံဆက်ကပ်၍ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာဆည်းပူး၊ ကျင့်ဆောင် လိုက်လျှောက်ပြီး ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို သွန်သင်ပေးသည်ဟုဖော်ပြ ထားသည်။
အယ်လင်ဂျီဝှိုက်မှ အရေးပါသောရှုထောင့်တစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည်မှာ၊ ‘ဧဇရသည် အာရုန်၏အနွယ်မှပေါက်ဖွားသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သင်တန်း ကျောင်း၌ တက်ရောက်ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ မှော်ဝိဇ္ဇာအတတ်၊ နက္ခတ်ဗေဒင် အတတ်နှင့်လည်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော မေဒိ-ပေရသိခေတ်ပညာရှိတစ်ဦးဖြစ် သည်။ သို့သော် သူသည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘဲ၊ ဘုရားသခင် နှင့်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိစေရန် တမ်းတမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏အလို တော်နှင့်ညီသော ဥာဏ်ပညာမျိုးကိုလိုလား၏။ သို့အတွက်ကြောင့်လည်း ‘ဧဇရသည် ထာဝရဘုရား၏တရားတော်ကို စစ်ဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ကို ဣသရေလအမျိုး၌သွန်သင်ခြင်းငှာ လည်းကောင်း သဘောကျသောသူဖြစ်၏’ (ဧဇရ ၇း၁၀)။ ထိုအကြောင်း ကြောင့်ပင် သူသည် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတို့၏ရာဇဝင်သမိုင်းကို လေ့လာ ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို ]ပုရောဖက်နှင့်ဘုရင်များ} စာအုပ်၌ အကျယ် တဝင့်ရေးသားထားပြီးဖြစ်သည်။ ရာဇဝင်သမိုင်းနှင့် ကဗျာစာတိုဝတ္ထုနှင့်ကျမ်း ကိုးကျမ်းကားများကိုလေ့လာခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်အခွင့်ပေး၍ ယေရုရှလင် ပျက်စီးရခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏လူမျိုးတို့သည် တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသားများတို့ ၏ကျွန်သဘောက်အဖြစ် ခေါ်ဆောင်ခံရခြင်းအကြောင်းကို နားလည်သိရှိခဲ့ ရသည်။’ (ပုရောဖက်နှင့်ဘုရင်များ၊ စာမျက်နှာ ၆၀၈)။
‘ဧဇရ၏အားထုတ်မှုသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို သာ၍စိတ်ဝင်စား သွားစေသည်။ သန့်ရှင်းသောအရေးအသားများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းပွားများခြင်း များကိုလည်း ဖြစ်စေပါသည်။ ပညတ်ချက်ရေးထားသမျှတို့ကိုစုစည်းသည်၊ ဝေငှဖြန့်ချိသည်။ သန့်ရှင်းသောနှုတ်ထွက်စကားများကို လူအများ၏လက်တွင်း သို့ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအသိပညာ၊ အတတ် ပညာများကို မျှဝေပေးခဲ့သည်။’ စာမျက်နှာ ၆၀၉။
မှတ်သားဖွယ်ရာအချက်မှာ ဧဇရသည် တစ်ပါးအမျိုးသားတို့၏ နည်းပညာများကို သင်ယူခဲ့ရသည့်တိုင်၊ သူ၏အမြင်မှာ ထိုအရာများသည် မပြည့်စုံသေး။ ထိုအတွက်ကြောင့် အမှန်တရား၏မူလဘူတမှလာသောအမှန် ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ငှင်းမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပညတ်တရား တော်များပင်ဖြစ်သည်။ လောကရေးရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ မသင်ကြားပေး ခဲ့ရသောပညာကို သင်ယူခဲ့ရသည်။ လောကရှိတက္ကသိုလ်ပညာများသည် အမှား မကင်းနိုင်ပါ။ မှော်အတတ်ဝိဇ္ဇာပညာများသည် သူ့အတွက်မည်သို့အသုံးဝင် နိုင်ပါမည်နည်း။ ယနေ့အချိန်အခါမှာပင် လောကပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ် တို့မသင်ယူသင့်သောအရာအများအပြားရှိနေပါသလား။
သောကြာ အောက်တိုဘာ ၄
အယ်လင်ဂျီဝှိုက်ရေးသားသော “Ezra, the Priest and Scribe,” pp. 607-617, in Prophets and Kings.
ဧဇရ၏အားထုတ်လုပ်ဆောင်မှုကိုလေ့လာပါ။ ‘ဧဇရသည် ဘုရားသခင်အတွက်စကားပြောပေးသူဖြစ်လာသည်။ ကောင်းကင်ကိုအုပ်ချုပ် သောနည်းဥပဒေပညတ်များကို လူတို့အားပညာပေးဆုံးမသည်။ သူ၏သက်တမ်း တစ်လျှောက်၌ ဘုရင်မင်းကြီး၏ညီလာခံအတွင်း မီဒိုပါရှန်မှာသော်လည်း ကောင်း၊ ယေရုရှလင်မှာသော်လည်းကောင်း သူသည် ဆရာတစ်ဆူပင်ဖြစ် သည်။ သူသင်ယူရရှိသောအမှန်တရားအတွက် တခြားသူကိုဝေငှသောအခါ ၌လည်း သူ၏စွမ်းရည်ဥာဏ်ပို၍ထက်မြက်လာသည်။ သူသည် ဘာသာ တရားကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ဦး၊ လုံ့လဝီရိယရှိသူတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ နေ့စဉ် အသက်တာ၌ မြင့်မြတ်သောဘုရားသခင်၏သက်သေခံတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရသည်။’ အယ်လင်ဂျီဝှိုက် P.K. (Prophets and Kings, p. 609).
ယနေ့အချိန်အခါပြန်လည်ြုပပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဧဇရလိုပုဂ္ဂိုလ် မျိုးလိုအပ်နေပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အပြစ်ကိုမဖုံး၊ ဘုရားရှင်ကိုဂုဏ်ြုပ ခြင်းအမှုကိုလည်း မလွဲမရှောင်သူများဖြစ်ကြသည်။ တာဝန်ကိုဝန်ထုပ်တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်နေသူတို့သည် အမှာြးုပမိလျှင် စိတ်ငြိမ်သက်မှု မရှိတတ်။ မကောင်းမှုကိုလည်း မှားယွင်းသောမျက်ကန်းမေတ္တာမျိုးဖြင့် ဖုံးအုပ် ခြင်းမြုပတတ်။ ဘုရားသခင်သည် လူကိုမျက်နှာမလိုက်တတ်။ လူနည်းစုကို ဆုံးမပြီး၊ လူအများအတွက်ကရုဏာတော်ကိုပြသတော်မူတတ်ခြင်းကို သတိရ အောက်မေ့လိမ့်မည်။ မကောင်းမှုကိုလက်မခံသူများသည် ခရစ်တော်၏စိတ်နေ စိတ်ထားကို အမြဲဖော်ပြသူများဖြစ်ကြောင်းလည်း သတိရကြလိမ့်မည်။ Page 675.
Taggedlesson 1 4q19myanmar ssl
Next Article ZERUBABELA LEH EZRA-TE HUN LÂI CHANCHIN l1